Kutheni le nto kufuneka utyale imali kwi-infographics kwangoko | Martech Zone
Kutheni le nto kufuneka utyale imali kwi-infographics kwangoko
NgeCawa, Oktobha 25, 2015 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
yethu Nkonzo Iphuhlise ngaphezulu kwe-100 infographics kwaye, ukuza kuthi ga ngoku, a iqhinga elinamandla Iyaqhubeka ukungqina impumelelo kubo bonke abathengi esenzelwe bona. Ngoku sibenzela inani leearhente kwaye sandise neminikelo yabo kubaxumi babo.
Amashishini apapasha #infographics ane-12% yevolumu enkulu yezithuthi. Ngokophando olwenziwe ngu Iigrafu.net
I-infographics inezibonelelo ezigqitha kuninzi lwezicwangciso zomxholo:
Cognition -Ukuba yenzelwe kwaye yenziwa ngokufanelekileyo, infographics ibonelela ngolwazi kwifomathi enokusebenziseka ngokulula.
Intsholongwane -Ngokuba ngumfanekiso omkhulu nje, iifomografiki zikhutshelwa ngokulula kwaye zabelwana ngazo kwiwebhu yonke.
ukufuna -Xa kwabelwana ngazo, zihlala zivelisa izalathiso ezifanelekileyo kumqambi, zisonyusa igunya lazo kwiinjini yokukhangela.
Ukusebenzisana ne-arhente enkulu ye-infographic yeyona nto iphambili kwimpumelelo yakho. Ukwenziwa ngokufanelekileyo kwe-infographic kufuna ukuba kwenziwe uphando, ukukhula kwamabali, uyilo, ukubizelwa inyathelo, kunye nokukhuthaza ukuqonda ngokupheleleyo ukubanakho. I-infographic eyenziwe kakuhle inokubonelela ngeenyanga okanye iminyaka yokugcwala okufanelekileyo kwindawo yakho.
Qinisekisa ukuba iarhente inamava kwishishini lakho. Ujoliso lwethu lube kubuchwephesha obugqithisileyo okanye kwintengiso egxile kubume babantu. Sinethamsanqa lokuba sibabonise apha kwibhlog yeTekhnoloji yokuThengisa ukwandisa ukufikelela kwabo.
Myalelo we-Infographic namhlanje!
Sukuthatha ilizwi lethu ngayo, iingcali ze-infographic Neoman Uyile waphuhlisa le infographic yokuba kutheni besebenza kakuhle kangaka. I-Neoman ivelisa infographics emnandi-qiniseka ukujonga eyabo portfolio kwaye ucofe kule infographic ingezantsi ukuya jonga uguqulelo olunxibelelanayo:
tags: infographic arhenteuyilo lwe infographicI-infographics esebenzayoAmanani entengisoNeomanodolo infographics
Uyilo lweCrowd: Crowdsource Graphic Designs ukusuka kuma-485,000+ abaSebenzi